Shiinaha Filter Kuuriya Filter94 sanka siligga Warshad, Soosaarayaasha Iyo CE - Tiknoolajiyadda Daahirinta (Zhejiang) Co., Ltd.
Hoyga > Silig sanka > Maaskaro silig sanka > Filter Kuuriya94 silig sanka ah
Wayaheenna siligga 4mm laba geesle ee sanka ah ma laha dhammaadyo iyo guntiyo jaban. Waxay ka gudubtay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS. Waxay leedahay ROHS ilaalinta deegaanka, gaarta kuwa aan sun ahayn, iska caabin laabaya iwm. Waxaa loo dhoofiyay in kabadan toban wadan sida Canada iyo Jarmalka.
Wayaheenna siligga 4mm laba gees leh ayaan lahayn dhammaad dillaac iyo dambas Waxay ka gudubtay heerka shahaadada caalamiga ah ee SGS. Waxay leedahay ROHSen Environmental protection, gaarto sun aan sun ahayn, iska caabin isku laaban iwm. Waxaa loo dhoofiyey in kabadan toban wadan sida Canada iyo Jarmalka.
Hordhac wax soo saar ah Filter Kuuriyada Kuuriya94 silig sanka ah
1.Twuxuu laba jibaar silig sanka ka kooban yahay 2pieces of 0.45-0.8mm silig bir ah iyo xarunta PP. Sababtoo ah birta gudaha ee birta, waxay leedahay saameyn hagaajin fiican. Marka la barbardhigo hal xudunta iyo sanka oo dhan, sanka laba-geeslaha ayaa leh qaab fiican.
2. 4mm silig laba gees leh oo sanka ah ayaa lagu wareejin karaa 360degrees, maroojin macquul ah, saameyn qaabeyn wanaagsan.
2.ProductParameter (Specification) ee Filter Kuuriya S4 silig sanka
Feature-soo-saarka iyo Codsiga Filter Kuuriyada Kuuriya94 silig sanka ah
The4mm silig laba-geesle ah oo sanka laga soo saaro oo aanu soo saarin malaha cidhifyada iyo guntimaha jaban, waxaa si ballaaran loogu adeegsadaa maaskaro N95 iyo maaskarada diy.
Faahfaahinta wax soo saarka ee Filter Kuuriyada Kuuriya94 silig sanka ah
Shahaadada Wax soo saarka eeFilter Kuuriya94 silig sanka ah
6.Geli, Rarid iyo u adeegidbaFilter Kuuriya94 silig sanka ah
Waxaan ku siin doonaa 7 * 24 saacadood adeeg raacid iyo taageero farsamo ah markaad iibsaneyso 4mm silig laba gees leh sanka shirkadeena, si aadan walwal uga qabin iibka kadib.
1. S: xaqiijin noocee ah ayuu sankaaga maray?
J: Xadhkaha buundada sanka ayaa ka gudubtay SGS, shahaadada cpst, ilaalinta deegaanka ROHS, gaarto sun aan sun ahayn, isku laab laabashada iyo tijaabooyinka kale ee la xiriira, waxaana loo dhoofiyay Kuuriyada Koonfureed, Spain iyo dalal kale.
2. S: sidee buuq-sanka sanka oo xumaanayaa uu mas'uuliyad ugu soo celiyaa?
J: cilad-darrada buundada sanka waxaa keenay xakamaynta heerkulka aan habboonayn ee habka wax-soo-saarka.Shirkadayda shirkaddu soo saartay ee silig laba-gees leh ayaa loo rogi karaa 360 digrii, wixii qalloociyana ma beddelayso hoos u dhaca.
J: waxaa jira xayawaan rabaayad ah, PE iyo PP oo loogu talagay buundada sanka ee maaskaro. Soosaarayaasha kaladuwan waxay sameeyaan agab kaladuwan Midda guud waa polypropylene hydrocarbon resin (PP). Noocaan noocan ah silig biraha ceyriinka ah ayaa foorara oo qaabeeyaa ficilka xoogga dibadda, kaasoo sii wadi kara waxqabadka wanaagsan ee jira.
4. S: N95 maskwith sanka aluminium ama sanka laba geesoodka ah?
5. S: Immisa tan oo buundo ah ooone ah ayaad soo saari kartaa hal maalin?
4mm Xargaha siligga laba geesoodka ah